Olee otú Jiri iPhone ka Were Panoramic Photos on iPhone
Panoramic foto ndị sitere n'ike mmụọ nsọ echiche si ochie eserese na-egosi Mpaghara ke a obosara n'akuku na n'ezie foto apụghị dabara ya na. The pụrụ ichetụ n'echiche nke ndị mmadụ na-abịa weghara ọ bụla otu otu n'ime beauties ke idaha otu foto mere a ụzọ ka panoramic photos. Ọ bụ ihe ịtụnanya mmetụta ịmata otú a idaha ke 360 ​​ogo na-dabara n'ime 180 ogo na-eme ka a dị iche iche na-eju afọ ego. Panoramas iwere nke oké osimiri, ugwu ranges, mara mma ụlọ na ọdọ mmiri ndidi fascinatingly ebube a anya. Ma anyị pụrụ ime panoramic foto na anyị iPhones? Ee.
Olee otú na-panoramic foto na iPhone?
Dabere na version nke iOS na version nke iPhone na i nwere unu nwere ike dị iche iche nhọrọ ka ewere a panoramic foto. N'agbanyeghị nke nta iche niile iPhones na-eru nke na-ewere a panoramic foto ịkekọrịta yiri Filiks. I nwere ike iri panoramic foto naanị na iPhone 4s na mgbe e mesịrị ụdị. Nhọrọ adịghị ruo iPhone 4.
N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ nkọwa na-ewere ezi panoramic foto na gị iPhone.
Họrọ a ebe nke ị chọrọ na-panoramic foto
Họrọ a amalite ọnọdụ amalite Ndekọ panorama
Guzo a mụ na adabara ọnọdụ
Emeghe ngwa igwefoto gị iPhone
Gaa nhọrọ ma họrọ panorama (nhọrọ n'okpuru aha dị iche iche dị iche iche nsụgharị nke iOS)
Ị ga-jụrụ iji họrọ ntụziaka nke panning; họrọ ekpe gaa n'aka nri ma ọ bụ ikike hapụrụ
Enweta na shutter button ka ịmalite ndekọ
Bugharịa gị iPhone nwayọọ nwayọọ na ji nwayọọ nwayọọ kwupụta họrọ direction
Adịghị akpali gị iPhone elu na ala; a ga-ebelata ihe oyiyi mma
Ozugbo mbido etiti-abịa n'ime anya ọzọ Panorama completes (ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụsị n'etiti usoro, ị nwere ike enweta shutter button ọzọ na panorama ga-akwụsị ebe ị kwụsịrị ya.)
Ịhụchalụ foto gị na dị nnọọ ka ị ga-ịhụchalụ ọ bụla ọzọ foto gị iPhone
Ị nwere ike idezi gị panoramic foto dị ka ị ga-ọ bụla ọzọ na foto
Iji nwere zuru panoramic anya, tụgharịa iPhone saidwees
The inweta nke panoramic ndise bụ ụdị nkà. Bụrụ na ị nwere nkà na chọrọ iji nweta ezigbo panoramic foto, ị ahụ nwere iji họrọ ebe ebe gị iPhone na-aga ịbụ. Otu ihe dị mkpa na-ewere foto na ekwentị gị bụ ìhè na idaha. Ebe ọ bụ na ekwentị mkpanaaka na adịghị nye ezuru ìhè mụnyere onye na-emeghe idaha ị nwere iji họrọ a oge mgbe e otutu ìhè.
Mgbe Ndekọ panorama, i nwere Pan gị iPhone dị ka nwayọọ nwayọọ dị ka omume. Iji nwayọọ na-ije nke gị iPhone mma àgwà nke panorama ga-adị. Otu ihe na-agaghị eme n'oge a panorama kpọọ bụ ịkwaga gị iPhone ekwesị ma ọ bụ na ala. Elu na ala mmegharị ga ichegbu àgwà nke na elu na ala n'ọnụ nke foto. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ larịị nke na akpaaka ukpụhọde, ọ dị mma na ị na-ọ dịrị ya mfe gị iPhone hazie. Na nloghachi, ị ga-esi ka mma panorama.
E nwere software na ike inyere gị aka na-ewere panoramic foto. Ụfọdụ na-depụtara n'okpuru.
Software na ikwado panoramic osise iPhone
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwa dị na internet. Ngwa bụ naanị 6,6 MB na size na dị na gburugburu a iri na abuo asụsụ gụnyere English. Ị nwere ike iji nke a ngwa na iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị. iPod, iPad na iPod aka nile pụrụ iji nke a ngwa. Ọ na-ezi uche ọnụ na $1.99 kwa download.
Ọgụgụ: Autostitch Panorama
Nke a bụ otu ọzọ ngwa n'ihi na ewere oké iPhone panoramic photos. A ngwa bụ 9,9 MB na dị na French, English na Japanese. Yudo inc nwere tọhapụrụ ngwa na 2012. Ọ na-e emelitere-version 1.3.5 ugbu a. Ọ bụ iji na-akwado na a dị iche iche ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ-agba ọsọ na iOS 4.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị. Ahịa bụ $1.99
Ọgụgụ: Sfera Panorama
A free iPhone ngwa na e mere na-eme ka panoramic photos; a na ngwa bụ site Microsoft Corporation. App e emelitere na 2014. Ọ na-esetịpụ 6.5 MB nke ohere. Ọ dị naanị na English. A na ngwa bụ dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ na iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị.
Ọgụgụ - Photosynth panorama
Dị maka $1.99 a ngwa-ewe 4.8 MB nke disk ohere. Emelitere ikpeazụ na January 2014 ọ bụ dakọtara na ole na ole ngwaọrụ na iOS 6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. The ngwa bụ bụkwa dị na ihe karịrị ọkara a iri na abuo asụsụ. Ụlọ ọrụ na-arụpụta a ngwa ndị Dermandar.com mara maka ya Fim okenye edemede.
Ọgụgụ - DMD Panorama
360 panorama bụ ihe ọzọ na ezi ngwa n'ihi na iPhone na nwere ike inye ezi àgwà panoramic photos. Ọ nwere 3 ụdịdị nke akada - preview, video na oyiyi mode. Photos pụrụ n'ụzọ dị mfe na-akọrọ ka Facebook ma ọ bụ Twitter. Ọ bụ maka $0.90.
> Resource> iPhone> Jiri iPhone Inweta Panoramic Photo